तिलगंगाले २५औँ वर्षगाँठमा पायो डब्लुएचओको मान्यता, ४ लाख शल्यक्रियासहित ६० लाख आँखारोगीको उपचार – Health Post Nepal
२०७६ साउन ६ गते १७:५२
नेपालको मात्र नभएर छिमेकी मुलुकहरूका बिरामीमाझसमेत आँखा उपचारको केन्द्रका रूपमा ख्याति आर्जन गर्न सफल तिलगंगा आँखा अस्पतालले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मान्यता पाएको छ । अस्पतालले आँखा उपचारको क्षेत्रमा पुर्याएको गुणस्तरीय सेवाको कदर गर्दै डब्लुएचओले तिलगंगालाई आफ्नो समन्वय केन्द्रका रूपमा सोमबार मान्यता दिएको हो ।
स्थापनाको २५औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा अस्पतालले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको वार्षिकोत्सव समारोहका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा डब्लुएचओले तिलगंगालाई आफ्नो समन्वय केन्द्रको मान्यता दिएको घोषणा गर्यो । डब्लुएओका अनुसार अस्पतालले आँखा स्वास्थ्यसेवा, लेन्सको उत्पादन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा पुर्याएको उल्लेख्य योगदानको कदरस्वरूप समन्वय केन्द्रको मान्यता दिइएको हो ।
वार्षिकोत्सव तथा डब्लुएचओ मान्यता घोषणा समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले अस्पतालले आँखा उपचारको क्षेत्रमा असाधारण काम गरेको बताए । अस्पतालले मुलुकको समृद्धिको अभियानमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्दुक रुइतसहितको टिमले आँखा उपचारको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । अस्पतालको विकासका लागि आवश्यक जस्तोसुकै सहयोग गर्न सरकार सदैव तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आँखा स्वास्थ्यसेवालाई अनुगमन गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै आँखा एकाइको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । आँखा स्वास्थ्यसेवालाई अन्य सेवासँगै जोडेर अघि बढाउने गरी सरकारले स्वास्थ्य नीति ल्याएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. रुइतले अस्पतालले हालसम्म ६० लाख आँखारोगीको उपचार गरेको गरिसकेको जानकारी दिए । अस्पतालले २५ वर्षदेखि आँखा उपचारको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै डा. रुइतले अस्पतालको कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार अस्पतालले हालसम्म ४ लाखभन्दा बढी आँखाको शल्यक्रिया गरिसकेको छ ।
तिलगंगाले उत्पादन गरेको लेन्स नेपालमा मात्र नभएर विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । ३५ लाखभन्दा बढी नेपालीले स्वदेशमै उत्पादित कृत्रिम लेन्सबाट उज्यालो देख्न पाएका छन् । तिलगंगामा उत्पादित लेन्स विश्वमै सस्तो र गुणस्तरीय भएका कारण यसको माग दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । लेन्स उत्पादनको नेतृत्वकर्ता वर्तमान निर्देशक डा. रुइत आँखा उपचारको क्षेत्रमा पुर्याएको अमूल्य योगदानबापत सुप्रसिद्ध म्यागासिसी पुरस्कारबाट सम्मानित समेत भएका छन् ।